Ukuvuvukala - a "intambo" sezicubu zezinzwa esakha ngenxa ukuhlinzwa, ukuhlukumezeka, noma ukuvuvukala. Noma yimuphi ukuhlinzwa e ukhalo noma ukuhola isisu ukuvuvukala. Ukuvikelwa umzimba abahlala Lokusakaza izinqubo sokuvuvukala ukuvuvukala kwamathumbu umsebenzi oyinhloko.
I ukuvuvukala kwakhiwa emva kokuhlinzwa ngenxa:
- zokukhwabanisa bezakhamuzi nezicubu;
- khona igazi;
- izicubu ischemia noma hypoxia (supply enganele lokhu wegazi nezicubu oxygenation);
- omiswe ijwabu phakathi nokuhlinzwa.
Ukuze lolu daba angaphandle okubangela okuvela ukuvuvukala, izinhlayiya zihlanganisa ukuvuvukala udokotela amagilavu, sutures, fibre noma gauze swabs. I ukuvuvukala kwakhiwa emva kokuhlinzwa futhi i-endometriosis. Lona lapho ingaphakathi lesisu esincane wegazi ingena esesikhathini, inamaseli endometrium. La mangqamuzana angasuswa ngosizo amasosha omzimba abo, uma zikhona amaphutha bona bukhoma isebenze neziqhingana, awo adedelwa komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Eduze lezi neziqhingana futhi ukuvuvukala kwakhiwa.
Ukuvuvukala emva kokuhlinzwa: izimpawu.
isifo Yesigcilikisha usungaqala ngesimo kancane kancane noma okungazelelwe zikhula izinhlungu, ethuthukisiwe wamathumbu ukunyakaza (peristalsis), okuyinto kungase kuhambisane ukunyuka kwezinga lokushisa, ukuhlanza enobudlova, ubuthakathaka, futhi kunciphisa umfutho wegazi.
Ukuvuvukala emva kokuhlinzwa: uphethwe.
Ukuba khona izibazi kanye ukuvuvukala ezahlukene ngalo ingaphakathi lesisu kungenziwa esolwa ezigulini eziye zabhekana isifo okhalo e abesifazane abaphethwe i-endometriosis noma ukuhlinzwa kule komgodi ongaphakathi kwamathumbu wawenziwa.
luhlolo gynecological aphakanyisiwe khona ukuvuvukala kule komgodi ongaphakathi kwamathumbu yowesifazane nge Amathuba 75% ngosizo ultrasound, kodwa amashubhu fallopian ungavumeli idatha ukukhipha khona ukuvuvukala, okuyinto ebambezela sina sokukhulelwa. A ethembisa zokuxilonga ukuvuvukala kukhona izindlela-magnetic resonance imaging (MRI), izithombe noma zenuzi resonance kazibuthe (NMR). Nale ndlela bamba, amelela isimo jikelele umzimba futhi lesi sifo.
Laparoscopy - eyodwa yezindlela esiyinhloko sitholakele ukuvuvukala, okuyinto ikuvumela ukuba bahlole kobukhulu ukuvuvukala futhi baphathwe kusaqalwa khona kwabo. izigaba ezintathu ezahlukene adhesion kumiswa:
Isigaba I, spikes zitholakala emhlabeni amashubhu fallopian noma amaqanda.
Isiteji II, ukuvuvukala okungadingeki phakathi amashubhu fallopian futhi ezikhiqiza amaqanda.
Isiteji III kwenzeka obukhulu ukuvinjelwa amaqanda.
Ukuvuvukala emva kokuhlinzwa: ekwelapheni
Indlela eyinhloko ekwelapheni ukuvuvukala ngemva kokuhlinzwa - a laparoscopy. micromanipulators Special ukukhiqiza adhesiolysis - a asike izidumbu zabantu nokususwa ukuvuvukala. Indlela ukwehlukana ukuvuvukala kuhlanganisa akvadissektsiyu, electrosurgery, ukwelashwa laser. Ukuvimbela zokwakheka entsha emva laparoscopy usebenzisa izindlela ezilandelayo:
- esigubuzele ezikhiqiza amaqanda futhi amashubhu fallopian ekhethekile polymer resorbable ifilimu;
- ukwethulwa uketshezi isithiyo (povidine, dextran) phakathi izakhiwo yokwakheka.
Phakathi izinyathelo zokuvimbela into ebaluleke kakhulu - ukumisa inqubo adhesion, noma ukunciphisa isibalo sabo, ukuminyana kanye nokusatshalaliswa in the ingaphakathi lesisu, ngesikhathi esifanayo ulondoloze isimo inqubo evamile ukuphulukiswa.
Zonke nezindlela zokugwema zingahlukaniswa ngamaqembu:
1. Amasu okuhlinza kanye nokusetshenziswa yabo;
2. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa izithiyo mechanical - okuthiwa okufakiwe;
3. nezinqubo yokwelapha Physical.
Kungakhathaliseki sifo, kuba lula kakhulu ukuvimbela kuka ukwelapha. Hlala uphilile!
Prevention psoriasis ekhaya
Okufanele ukwenze uma welulela nemisipha emilenzeni. Bhinyila: ekwelapheni amakhambi abantu